HDPE, PP, PVC Vertical Type Wall Double Corrugated Pipe and PVC Ribbed Pipe Extrusion line - China HDPE, PP, PVC Vertical Type Double Wall Corrugated Pipe ary PVC Ribbed Pipe Extrusion mpamatsy, Factory –Jwell
Ny fantsom-pamokarana DWC dia ampiasaina amin'ny rafi-pitetezana rano. Izy io dia soloina solo-sainin'ny solosaina rehetra. Manasongadina ny fahaizany avo lenta sy miorina ary miasa tena mandeha ho azy. Ho an'ny HDPE, azonao atao ny misafidy extruder visy tokana mahomby. Ho an'ny PVC, afaka misafidy conical ianao kambana extruder na extruder kambana-kambana mifanila. Ny rafitra fananganana dia misy bobongolo sy mpiorina. Azo soloina mora foana ny poloka matevina ary manana rafitra fanamainana rivotra na rano izy ireo. Ny fizotran'ny fametahana dia azo antoka amin'ny milina fanapahana. Ny tsipika famokarana dia azo ampiasaina miaraka amin'ny rafitra SIEMENS PLC.
Savaivony Sodina (mm)
Output PVC (kg / h)
Output HDPE (kg / h)
Hafainganana Max (m / min)
Tsipika haingam-pandeha vita amin'ny plastika vita amin'ny alim-plastika